အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်ပြခန်း Sinclair ရဲ့ "Sharyl Attkisson နှင့်အတူအပြည့်အဝတိုင်း" အတွက် Show Package တွေဖန်တီးလိုက်တဲ့ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်ပြခန်း Sinclair ရဲ့ "Sharyl Attkisson နှင့်အတူအပြည့်အဝတိုင်း" အတွက် Show Package တွေဖန်တီးလိုက်တဲ့
အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်ပြခန်း Sinclair ရဲ့ "Sharyl Attkisson နှင့်အတူအပြည့်အဝတိုင်း" အတွက် Show Package တွေဖန်တီးလိုက်တဲ့
ဝါရှင်တန်နိုင်ငံရေး၏ဂရင်းနစ်, CT- အဆိုပါရှုပ်ထွေးကမ္ဘာကြီးအဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်ပြခန်းရဲ့ကြော့အတွက်ကွေးဖန်တစ်ဦးယဉ်မှုစနစ်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းနေသည် အဓိကခေါင်းစဉ်များနှင့် In-ပြပွဲဂရပ်ဖစ်အထုပ် "Sinclair အသံလွှင့် Group ၏အသစ်ကတနင်္ဂနွေစုံစမ်းသတင်းရှိုးSharyl Attkisson နှင့်အတူအပြည့်အဝတိုင်း။ " အဆိုပါဒီဇိုင်းအစီအစဉ်ကို "အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများအတွက်တာဝန်ယူမှု" ပေါ်တွင်အသစ်ကပြသရဲ့အာရုံစိုက်ဆက်သွယ်တဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်အမေရိကန်ကက်ပီတောလ်တစ်မှတ်သားသိနိုင် image ကိုကျော် superimposed, အနီရောင်အဖြူနှင့်အပြာတင့်စပြရန်န်ထမ်းများနှင့်ကျယ်ပြန့်နှင့်အတူအထဲတွင်ကိုကြိုးနဲ့တုတ်မှ Sinclair အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်စုံစမ်းအစီရင်ခံရန်၎င်း၏ကတိကဝတ်အားကောင်းလာစေပါတယ်။
"ဒါဟာကျွန်တော်တို့အားလုံး impact ကြောင့်အလေးအနက်အကြောင်းအရာများထံအပ်နှံလေးနက်သတင်းစာပညာဖြစ်ပါတယ်" ဟုဖြစ်သူ Scott Livingston, Sinclair အသံလွှင့် Group မှသတင်း၏ဒုတိယသမ္မတကပြောပါတယ်။ "
"ဒီလဖြန့်ချိSharyl Attkisson နှင့်အတူအပြည့်အဝတိုင်း ' ယခင်ဖြစ်သော CBS ဝါရှင်တန်သတင်းထောက်များနှင့်အပေါ်ယူပြီးဆုရဂျာနယ်လစ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မည်ဖြစ်သည် "ဟုအကြောက်ကင်းလမ်းအတွက်တသိုက်မှာအကြောင်းအရာများ။ " ဒီ 30 မိနစ်ပြပွဲအစပိုင်းတွင်ရုပ်မြင်သံကြားဘူတာ၏ Sinclair ရဲ့အစုစုမှတဆင့် 43 သန်းအိမ်ထောင်စုပေါင်းရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။
"Sharyl Attkisson နှင့်အတူအပြည့်အဝတိုင်း ' Sinclair အသံလွှင့်အုပ်စုများအတွက်အမှတ်တံဆိပ်ပြခန်းရဲ့ဒုတိယမကြာသေးမီတာဝန်ကျတဲ့နေရာဟာဖန်တီးမှု Boutique သတင်းတစ်ခု modular On-ဝေဟင်အထုပ် 51 ဒေသခံစျေးကွက်များတွင်ပျော်စေထုတ်လုပ်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအထုပ် Curves နှင့်စမတ်မျက်မှန် themes များပေါ်တွင် အခြေခံ. နှစ်ဦးကိုဒီဇိုင်းအယူအဆပါရှိပါတယ်။ ဒေသခံဘူတာခြင်းဖြင့်လွယ်ကူသောစိတ်ကြိုက်ဖို့သူ့ဟာသူချေးနေစဉ်ချောမောအထုပ်တစ်ဖွဲ့လုံးက Sinclair အသံလွှင့်အုပ်စုတစ်ခုစုစည်း, ခေတ်ပြိုင်အမှတ်တံဆိပ်ပုံရိပ်ပေးပါသည်။
အဆိုပါ "အပြည့်အဝတိုင်း ' ပြပွဲမှတိကျသောဒြပ်စင်အသစ်ဖြည့်စွက်အနေဖြင့်ဂရပ်ဖစ်သတင်းအုပ်စု on-ဝေဟင်ကြည့်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်။ "ကျနော်တို့ကဝါရှင်တန်ရှိနိုင်ငံရေး၏ရှုပ်ထွေးသောက်ဘ်ဆိုက်ကိုကိုယ်စားပြုနေတဲ့အမြင်အာရုံပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးရန် Curves နှင့်စမတ်မျက်မှန်အထုပ်ထဲကနေ element တွေကိုအလုပ်" ဟု The အမှတ်တံဆိပ်ပြခန်းအလုပ်အမှုဆောင်ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာ Iain Greenway ရှင်းပြသည်။ "ဒါဟာဗိသုကာနှင့်ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ "
Sharyl Attkisson နှင့်အတူအပြည့်အဝတိုင်း မှ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်ပြခန်း on Vimeo.
Greenway ဖန် "ထင်ဟပ်" နှင့်လက်ရှိအမျိုးသားရေးအကျိုးစီးပွား "magnifying" ကိစ္စများအတွက်ပြပွဲရဲ့အခန်းကဏ္ဍများအတွက်ဥပစာကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ "ကျနော်တို့လာမယ့်အဆင့်အထိမူရင်းဒီဇိုင်းအယူအဆကို ယူ. " ဒီအမှတ်တံဆိပ်ပြခန်းထုတ်လုပ်သူ Alison Burke ကပြောလိုက်ပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကပျော်စရာခဲ့ရပြီး Sharyl နှင့်သူမ၏ပြပွဲကပိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ "
အထုပ်ထဲမှာကို Creative element တွေကိုအဓိကခေါင်းစဉ်, ဘန်ပါ, နိမ့်သုံးပုံနှစ်ပုံနှင့်နောက်ခံပါဝင်သည်။
2005 အတွက်ဖီးလ် McIntyre နှင့် Iain Greenway နေဖြင့်ဖြန့်ချိ, အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်ပြခန်းမျက်နှာပြင်မီဒီယာအားလုံးရှုထောင့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေတဲ့ဖန်တီးမှု Boutique ဖြစ်ပါတယ်။ , မဟာဗျူဟာမြောက်ဖန်တီးမှုနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, ကုမ္ပဏီဦးဆောင်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ်, positioning ကို, ဘက်ပေါင်းစုံဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်မြှင့်တင်ရေး၏ဘုံထဲမှာအသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖန်တီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာစူးစမ်းကူညီပေးသည်။ ဆုရဖန်တီးမှုမဟာဗျူဟာ Greenway နှင့်လေးစားဖွယ် chiefmarketing အလုပ်အမှုဆောင် McIntyre တစ်ဦးချင်းစီသည်စီမံကိန်း၏ဗဟိုမှာရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဘက်စုံသုံးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအတွက်ကျော်ကြားသူတို့ clients များဟာသူတို့ရဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သတ်မှတ်နှင့်တည်ဆောက်အသစ်ပိုမိုထိရောက်သောနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေသေချာ၎င်းတို့၏ကတိကဝတ်အတွက် Single-စိတ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်ပြခန်း 640 အနောက် Putnam ရိပ်သာလမ်း, ဂရင်းနစ်, မှန် CT 06830 မှာတည်ရှိပါတယ်။ 203.422.3900 ။ www.thebrandgallery.com
Evercast, LLC သည် Steven B. Cohen ကို Los Angeles ရှိ Los ၀ ံဂေလိဆရာအဖြစ်ခန့်အပ်သည် - အောက်တိုဘာလ 16, 2019
MTI ရုပ်ရှင်သည် CORTEX နှင့် DRS ™ Nova အတွက်နယူးယောက်ရှိ NAB Show တွင် Tools အသစ်ကိုပြသပါမည် - အောက်တိုဘာလ 14, 2019
ဗီဒီယိုရိုက်ကူးသည့်အသံအယ်ဒီတာများသည်ဗစ်တိုးရီးယားအုနွန်အားရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဆုဖြင့်ဂုဏ်ပြုရန် - အောက်တိုဘာလ 10, 2019
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရပ်ဖစ် ရုပ်မြင်သံကြား တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2015-10-29
ယခင်: Calrec Summa အသံ console ကိုလက်ပေါ်ပေးပါသည် Chabot ကောလိပ်မှာသင်ယူ
နောက်တစ်ခု: ဘာ? တစ်ဦးကတောက်ပထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဆူညံ FAN မပါဘဲ LED?